Lense Lemessa - Simalee (Official Video 2015) - Oromo MusicOromo Music
Lense Lemessa – Simalee (Official Video 2015)
Uploaded by Brandy Ford on June 16, 2015 at 5:09 am
Lense Lemessa &#8211; Simalee (Official Video 2015)
The best in new Oromo music. Classy video from a beautiful women with an equally beautiful voice.
bare geme says:
akkamii baareda wow﻿
Tuuttoo Tuutaa says:
Oromo artists are beginning to put out a world class music clips and tracks….what an achievement!!! Warri ummata Oromo addunyaatti gadi baasuuf qabsaawan marti galata qaban!! Ni turra malee ni urra!!﻿
Jannet Jannet says:
Woooow baayee namati tola jabaadhu sabbontu kenyaa!!﻿
wow i like it﻿
Munira Abbadidu says:
Amazing video waw﻿
alex kebede says:
wow , i have no words to express u and so good songs with better performance in like it so much and also i hope you will do the better project on music consert to develop afaan oromoo fi aadaa keeenya. horii bulii gadaan quufaa gabbinaa jabaadhuu nagaattii﻿
Faisal Ibro says:
temesgen taressa says:
sirba lallaafaa baay'ee namatti tola Leensee jabadhu﻿
Anwar R says:
What a beauty! What a voice!
Lense, seenaan kee seenaa qabsoo Oromoo ti. Wareegama abbaan kee gootichi keenya bilisummaa teenyaaf godhe, ati waa lafattin dhiifne.
yusuf kobboo says:
Lenseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee heduu sijalana jabaadhu jajabaadhu﻿
Yuniemojangswahciketik Swahciletik says:
Baredu tenya sirbi kee heddu namati tolaa jabadhu﻿
Matschaaraa Raamasses says:
Beautiful and inspiring!!!﻿
Gaffar Awad says:
Leeeensee Lammeessaa baayyee cimtuu fktaa jabaadhu.
Gammadoo mucaa biyya kootii hojiin kee hundi ashaboo qabaa jabaadhuu itti fufii!!﻿
Hayyee hojjatoota sagalee sirba afaan kiyyaa baayyeen isin jaaladha!!
Dhugaa dubbachuudhaf sirni ammaa kun ykn hojiin tun ta durirraa wn adda baate fkti.kunis haala sagalee hunda qabdi jechuun sagalee funyee,laagee,hidhii ,irgee fi hargansuu irratti gaaridha! Ammas ciminaan hojjachuun ufii keessanifis aartii keenyafis bu'aa qaba.﻿